Raha toa moa ka … tononkira mivalana
Monday, September 27, 2010 | 5 comments comments
Na dia tsy fotoana tokony hanoratako mihitsy aza izao noho ny zavatra tokony hokarakaraina dia tsy laitra fa nitendry ny solosaina ihany. Vao tsy ampy herinandro akory aho no nieritreritra fa tsy hanoratra aloha raha tsy tonga ny volana oktobra dia gaga fa nahita hosoratana indray androany sady ohatry ny mila gala iray izay aho ka mba hiasa kely aloha.
Maro ny tononkira no eritreretintsika fa kitoatoa na nataotao foana, fa misy amin’izay ren’ny sofintsika koa ary raha tsy mandinika kely tsy mahita hoe tena vendrana be kay izay votoatin-dresaka izany. Ireto telo ireto aloha no hosinganiko manokana satria inoako fa mety tsy mbola hitanao ilay maha-vendrana azy (eny e, za kou lou sur fa tsy mpankafy Britney ianao mamaky io).
Voalohany, Britney Spears, Sometimes
Adika môtamô hoe “Njainjay za mitsoaka, njainjay mipitsika, njainjay mitsatsaka be, nefa za mba tena love be aminao maniry hiaraka aminao andro sy alina (sic)”
Afara kely indray mitohy hoe :
Adika môtamô hoe “Raha tena tia ahy ianao dia matokia ahy toy ny fomba atokisako anao”.
Eo le vendrana eo, ianao aza mitsoaka an’lé olona milaza matoky azy, izy koa zany angatahinao hitsoaka sy hiafina anao raha tia anao, doubleV té eff. Mba jôba kosa angamba ny auteur an’io
Faharoa : Paul Mc Cartney - Stevie Wonder, Ebony and Ivory
side by side on my piano keybord oh lord why dont we?
Adika môtamô hoe : Ny ébène (hazo mainty) sy ny ivoara (nify fotsy) dia miara-miaina tsy misy rahoraho eo amin’ny piano, koa nahoana isika olombelona no tsy ho afaka?
Jerena amin’izay ilay hira dia toy ny hoe miady amin’ny fanavakavaham-bolon-koditra, fa rehefa alainao sary an-tsaina izany hoe mainty sy fotsy eo amin’ny piano izany dia ho tonga saina ianao hoe na ity no hira faran’izay raciste be (dia tena vendrana be izany i Stevie Wonder izay mainty hoditra mihira hira raciste), na izay namorona ny tonony no tena vendrana be. Satria nahoana?
Satria fa, … (somary avilana kely ny molotra manonona ny hoe Satria fa), ny anjaran’ny mainty eo amin’ny piano dia efa sady tsy manompoelana amin’ny fotsy (ny tiako holazaina amin’ilay hoe manompoelana dia hoe fotsy 1, mainty 1, fotsy 1, mainty 1, …), no ny halavan’ny mainty ihany koa dia natao fohifohy ihany raha miohatra amin’ny fotsy. Izany hoe raha maniry hanana fiainana mirindra tsy misy ady noho ny resa-bolon-koditra izany Raolombelona dia tokony homena ny toerana sahaza azy ny mainty, izay eo amin’ny ampahefany mahery kely ihany fa tsy azo atao be loatra ary tsy mitovy amin’izay azon’ny fotsy anjakazakana. Sady voafehy ho hendry tsara amin’ny toerana ametrahana azy ny mainty, koa raha ilay piano izao no takonana lamba ny tapany ambony dia tsy misy afa-tsy fotsy tsara rafitra no ho hitanao.
Fahatelo: Princio, Tia vehivavy
Tena tiako daholo ianareo mianakavy
Tsy an-kanavaka avy aiza sy avy aiza fa rehefa vehivavy e!!
Tsy jerem-bolon-koditra fa rehefa gasy
Tena manja daholo fa tsy misy ratsy e!
Saika azo ninoana saingy rehefa jerenao ny état civil an’lé bandy asaina mihira an’io hira io, izay tsy iza fa i Princio, dia ho kepoka ianao mahita fa Vzongo ny vadin’ilehiry. Pffff, Marina lesy Ra-Princio fa ny vehivavy en général somary tsy dia intello loatra kanefa aza atao an’izao kosa ny sipa Malagasy fa ny Malagasy ange no mendrika indrindra raha samy taranak’i Eva e.
Vita tompoko, andeha hividy sigara singany efatra hofohana amin’izay.